Dowladda oo War Cusub kasoo saartey kufsi ka dhacay meelo kamid ah dalka - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Dowladda oo War Cusub kasoo saartey kufsi ka dhacay meelo kamid ah...
Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa Cambaareeysay fal kufsi ah oo loogu geystay seddex carruur ah oo da’dooda kala tahay seddex jir, afar sano jir, iyo 7 jir degmooyinka Afgooye iyo Balanballe.
War-saxaafadeed kasoo baxey Wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay inay si aad ah uga xun tahay kufsiga loo geystay seddex carruur ah ,isla markaana so xoogleh ay u cambaareyneyso falkaasi.
Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka oo War-Saxaafadeedkaan soo saartey ayaa tiri”Waxaan ugu baaqayaa cid walba inay ixtoraanto dhowrsanaanta sharafta dhibanayaasha iyo qoysaskooda kana fogaado dambi la xirira sheegitaanka Magacyadooda iiyo baahinta sawiradooda.
Ugu dambeyn Qoraalka wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in falka kasta oo tacadi ah in lagu soo wargeliyo,wasaaradda Ciidamada Booliska ama Xafiiska Xeer ilaalinta Guud ee Qaranka,kuwaas oo ah halka ugu horeeyo ee wax looga qabanayo.
Previous articleHowlgal ka socda Magaalada Jowhar & dad lagu qabtey
Next articleDhageyso:-Puntland oo soo bandhigtey natiijada dad laga baarey Coronavirus